Knowledge January 15, 2022
There’sahot pot swimming pool that can be eaten by people
There’sahot pot swimming pool that can be eaten by people. My musketeers have done it. China celebrates Lunar New Year A hostel in Hangzhou has introduced the Spicy Hot Pot Spring ( Spicy…
ငွေချေးတဲ့သူများ သိထားသင့်တဲ့ ယုံကြည်အပ်နှံ စာချုပ်၊ ငွေချေး စာချုပ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲများ.. ယုံကြည်အပ်နှံပဲ ပြောပြော.. ငွေချေးတယ် ပဲ ပြောပြော.. Share ခေါ်တယ် ပဲ ပြောပြော.. ကိုယ့်ငွေ သူများကို ပေးလိုက်တဲ့နောက် ပြန်မရတဲ့အခါ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို ယူကြတယ်။ အဲတော့လောလောဆယ် ဥပဒေ ကြောင်းအရ ဘယ်လိုတွေ ရှိလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်။ ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်တော့ ဥပဒေ ပညာရှင်အမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲ ကြုံရတဲ့ ကြုံနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့…
စစ်အာ‌ဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ အာဏာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အတွက် တိုင်းပြည်ကို မြေလှန်စနစ် ကျင့်သုံးလာသည် မှာ ၁၁ လ ထဲသို့ တအိအိ နှင့် ဝင်ရောက်လာနေခဲ့ပြီး လူထု ထောက်ခံမှုသည်လည်း သုံညအဆင့်သို့ ထိုးကျလာနေသည်။ တိုင်းပြည်ကို အမြန်ဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ပြည်သူ တရပ်လုံး အပေါ် စစ်ပွဲကြီး ဆင်နွှဲလာနေရသည့် အဆင့် ရောက်လာနေသည်။ ထိုမျှမကသေး လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ခေါင်းဆောင်များအား မတရားပုဒ်မများ…
Video January 2, 2022
ပုလဲတွင် ဒရုန်းဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်များကို ၃ ရက်တာ ဗုံးကျဲမှုမြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
ပုလဲတွင် ဒရုန်းဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်များကို ၃ ရက်တာ ဗုံးကျဲမှုမြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ်တွင် အောင်ဆန်းတပ်ဖွဲ့ နှင့် မဟာမိတ်များဖြစ်သော ပုံတောင်တိုက်ဂါးတပ်ဖွဲ့၊ ပုလဲပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့တို့ပါဝင်သော မဟာ မိတ်တပ်ပေါင်းစုက ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ၃ ရက်ကြာ ဒရုန်းဖြင့် ဗုံးကျဲ မှုမြင်ကွင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သားများ သေဆုံးမှုရှိကြောင်း ဒေသခံ အဖွဲ့များက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ Zawgyi…
Knowledge January 2, 2022
“မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က တကယ်အာဏာသိမ်းရင်တော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် အားလုံးနီးပါးထံကရော နိုင်ငံရေးသမား အတော်များများထံကပါ ရာစုနှစ်တဝက်မက ကျနော်တို့ ကြားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ ဂျင်း ဘာကြောင့်ထွက်လာသလဲ။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် အားလုံးနီးပါးက သူတို့ရဲ့ အင်အားကို ဘယ်တိုင်းရင်းသား သူပုန်ကမှ မနိုင်ဘူး။ နယ်စွန်နယ်ဖျားလောက်မှာပဲ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ ဘဝတုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ တွက်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးသမား အတော်များများ (အထူးသဖြင့် လက်ျာသမားတွေ) ကလည်း…
Knowledge December 31, 2021
မြန်မာပြည် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေအတွက် အတုယူသင့်တဲ့ စံနမူနာ တစ်ခု
“သာတူညီမျှ” – မြန်မာပြည် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေအတွက် အတုယူသင့်တဲ့ စံနမူနာ တခု.. ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသတစ်ခုရှိ ကျောင်းငယ်လေး တစ်ကျောင်းမှာ ဆရာမက ကျောင်းသူတွေကို စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခု လုပ်ပေးတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ထူးချွန်သူဟာ ဖိနပ်လေးတစ်ရံ ရမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကလေးတွေကလည်း အားရဝမ်းသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြိုင်ဆိုင် ရေးသား သီကုံးကြတယ်။ ရေးသားပြီး စာရွက်တွေကို ဆရာမထံ အပ်ကြတော့ အားလုံးရဲ့ ရေးသားပုံက ပြောင်မြောက်နေတာကို…
မင်းအောင်လှိုင်ကြောင့် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်များပင် ထိတ်လန့်နေရပြီ
ဖရူးဆိုး လူသတ်ပွဲ အပေါ် ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာ များ အားလုံးက ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့တွင် ဖရူးဆိုး၌ ပြည်သူများ အား မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြီးကို တနှစ်လုံး သတ်ဖြတ်ခဲ့သမျှ တွင် အဆိုးဝါးဆုံး ကျူးလွန်မှုကြီးဟု ကင်ပွန်းတပ်လာ ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်စမတ် ရုံးပိတ်ရက်များ ကျော်လွန်လာပြီး ရုံးများ ပြန်ဖွင့်လာသည့်အချိန်တွင်တော့ တကမ္ဘာလုံးက ဆူညံစွာ ကန့်ကွက် ပြောဆိုလာကြပြီ…